Vaovao - Hanova ny teknolojia amin'ny hoavy maharitra ve ny angovo azo havaozina?
Tany am-piandohan'ireo taona 1900, nanomboka namolavola ny tambajotran-jiro ireo matihanina momba ny angovo.Nahazo famatsiana herinaratra betsaka sy azo ianteherana izy ireo tamin’ny alalan’ny fandoroana solika fôsily toy ny saribao sy ny solika.Nanohitra ireo loharanom-angovo ireo i Thomas Edison, ary nilaza fa ny fiarahamonina dia mahazo angovo avy amin'ny kojakoja voajanahary, toy ny tara-masoandro sy ny rivotra.
Ankehitriny, ny solika fôsily no loharanon-kery lehibe indrindra eran-tany.Satria mihamaro ny mpanjifa mahatsapa ny fiantraika ara-tontolo iainana, manomboka mampiasa angovo azo havaozina ny olona.Nisy fiantraikany teo amin'ny fivoaran'ny teknolojian'ny indostria ny fifindrana eran-tany mankany amin'ny herinaratra ary nampiroborobo ny famatsiana herinaratra, fitaovana ary rafitra vaovao.
Photovoltaic sy ny fivoaran'ny masoandro hafa
Rehefa mitombo ny fangatahana angovo azo havaozina dia mamolavola teknolojia vaovao sy manitatra ny famatsiana ireo matihanina amin'ny herinaratra.Ny angovo avy amin'ny masoandro dia vokatra lehibe eran-tany eo amin'ny sehatry ny angovo madio.Ny injeniera momba ny tontolo iainana dia namorona takelaka photovoltaic (PV) hanatsarana ny fahombiazan'ny angovo madio.
Ity teknôlôjia ity dia mampiasa sela photovoltaic mba hamahana ny elektrôna ao amin'ny tontonana, ka miteraka angovo angovo.Ny tsipika fampitana dia manangona ny tariby herinaratra ary manova azy ho angovo elektrika.Ny fitaovana photovoltaic dia tena manify, izay manampy ny olona hametraka azy ireo amin'ny tafo sy toerana hafa mety.
Nisy ekipan'ny injeniera sy mpahay siansa momba ny tontolo iainana nandray ny teknolojia photovoltaic ary nanatsara izany, namorona dikan-teny mifanaraka amin'ny ranomasina.Nampiasa takelaka photovoltaic mitsingevana ireo manam-pahaizana momba ny angovo ao Singapore mba hamolavola ny toeram-pambolena masoandro mitsingevana lehibe indrindra.Ny fitakiana avo lenta amin'ny angovo madio sy ny habaka famokarana voafetra dia nisy fiantraikany tamin'ity fandrosoana ara-teknolojia ity ary nanova ny sehatry ny angovo azo havaozina.
Fandrosoana ara-teknolojia hafa voakasiky ny angovo azo havaozina ny tobim-piantsonan'ny masoandro ho an'ny fiara elektrika (EV).Ireo tobim-pamokarana herinaratra ireo dia misy tafo photovoltaic izay afaka mamokatra herinaratra madio eny an-toerana ary mamahana izany mivantana ao anaty fiara.Ireo matihanina dia mikasa ny hametraka ireo fitaovana ireo any amin'ny fivarotana enta-madinika sy toeram-pivarotana mba hampitomboana ny fahafahan'ny mpamily fiara mandeha amin'ny angovo azo havaozina.
Rafitra mifanaraka sy mahomby
Ny sehatry ny angovo azo havaozina koa dia misy fiantraikany amin'ny fandrosoan'ny teknolojia marani-tsaina.Ny fitaovana sy ny rafitra marani-tsaina dia mitsitsy angovo ary mampihena ny tsindry amin'ny tambazotran-jiro madio.Rehefa mampiaraka ireo teknolojia ireo ny olona, ​​​​dia afaka mampihena ny entona mandatsa-dranomaso izy ireo ary mitahiry vola.
Ny fitaovana maranitra vaovao izay mitantana ny sehatry ny trano fonenana dia thermostat autonomous.Mametraka ny teknolojia hanatsarana ny fahamarinan-toerana sy ny faharetan'ny panneau solaire an-tampon-trano sy ny teknolojian'ny angovo madio eny an-toerana ireo tompon-trano mitsinjo ny tontolo iainana.Mampiasa ny Internet of Things (IoT) ny thermostat Smart mba hampitomboana ny fidirana amin'ny Wi-Fi ho an'ny fiasa mandroso.
Ireo fitaovana ireo dia afaka mamaky ny vinavinan'ny toetrandro eo an-toerana ary manitsy ny mari-pana ao an-trano mba hampihenana ny fahaverezan'ny angovo amin'ny andro mahafinaritra.Izy ireo koa dia mampiasa sensor sensor motion mba hizarana ny trano ho faritra maro.Rehefa banga ny faritra iray dia hovonoin'ny rafitra ny herinaratra mba hitsitsiana herinaratra.
Ny teknolojia marani-tsaina mifototra amin'ny rahona dia manohana ihany koa ny fahombiazan'ny angovo.Ny mponina sy ny tompona orinasa dia afaka mampiasa ny rafitra hanatsarana ny fiarovana ny angona sy hanatsara ny fanamorana ny fitahirizana vaovao.Ny teknolojia rahona dia manatsara ny fahafahan'ny fiarovana ny angon-drakitra, manampy ny olona hitsitsy vola sy angovo.
Fitehirizana angovo azo havaozina
Ny fitehirizana ny selan-tsolika hydrogène dia fandrosoana ara-teknolojia iray hafa voakasiky ny sehatry ny angovo azo havaozina.Iray amin'ireo fetran'ny rafi-pamokarana herinaratra madio toy ny panneaux solaire sy turbine rivotra ny fananana azy ireo ambany indrindra.Ireo fitaovana roa ireo dia afaka manome herinaratra azo havaozina amin'ny andro mafana sy mandrivotra, saingy sarotra ny mamaly ny filan'ny mpanjifa rehefa miova ny toetr'andro.
Ny teknôlôjian'ny sela solika hidrôzenina dia nanatsara ny fahombiazan'ny fitahirizana angovo azo havaozina ary namorona famatsiana herinaratra betsaka.Ity teknôlôjia ity dia mampifandray ny panneau solaire sy turbine rivotra amin'ny fitaovana bateria lehibe.Raha vao mameno ny bateria ny rafitra azo havaozina, dia mandalo amin'ny electrolyzer ny herinaratra, mizara ny vokatra ho hydrogène sy oksizenina.
Ny rafitra fitahirizana dia misy hydrogène, mamorona famatsiana angovo manankarena.Rehefa mitombo ny fangatahana herinaratra dia mandalo amin'ny mpanova ny hydrogène mba hanomezana herinaratra azo ampiasaina ho an'ny trano, fiara elektrika ary fitaovana elektronika hafa.
Teknolojia maharitra amin'ny faravodilanitra
Satria tsy mitsaha-mitombo ny sehatry ny angovo azo havaozina, manohana sy mifanentana kokoa
hiditra an-tsena ny teknolojia.Ny ekipan'ny injeniera dia mamolavola fiara mandeha amin'ny herinaratra mandehandeha miaraka amin'ny tafo misy fotovoltaika.Mandeha amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro ny fiara.
Ny mpamorona hafa dia mamorona microgrids madio izay mampiasa angovo azo havaozina ihany.Ny firenena sy ny faritany kely kokoa dia afaka mampiasa ity teknolojia ity mba hanatrarana ny tanjona fampihenana ny entona sy hanatsarana ny fiarovana ny atmosfera.Ireo firenena mampiasa teknolojia angovo madio dia afaka mampihena ny dian'ny karbônina ary mampitombo ny fahafahan'ny herinaratra.
Tendrombohitra jiron'ny Solar Street, Flash jiro mandeha amin'ny masoandro, Jiro Masoandro tsy tantera-drano, Jiro masoandro amin'ny dobo filomanosana, Jiro masoandro, Jiro tondra-drano amin'ny masoandro,